Clicky WordPress Plugin ne Admin Yakaburitswa | Martech Zone
China, June 14, 2007 Chitatu, July 4, 2007 Douglas Karr
Clicky inotapira analytics kunyorera kunoita mushe mushe mushe pane chero wevakomana vakuru kunze uko. Ini ndinofunga musika mudiki idiki niche uye Clicky anofanirwa kuve yake nekukurumidza - ine a inotsvedzerera interface, yakakura mifananidzo, uye ruzivo irwo rwunoratidza rwakaringana neavhareji blogger.
A chinguva chakadzoka, Clicky akaburitsa WordPress Plugin yekumisikidza Clicky muWordPress. Sean akaita chinyorwa paGoodie Peji rake kuti aisaziva zvakawandisa nezveWordPress uye angadai aifarira kunge akavaka peji rekutungamira iko kunyorera kubva mukati meiyo WordPress Admin interface, asi aisaziva kuti sei panguva iyoyo. Ndakafadzwa chaizvo nebasa rakanga ratoitwa paClicky saka ndakavadhonzera mutsetse kuti ndione kana ndaigona kubatsira. Mhinduro yaive 'chokwadi'!
Mukati memaawa mashoma kupera kwevhiki, ini ndakavaka yakanaka admin peji yaive nezvose zvaidikanwa. Sean akazvipfekedza uye akazvigadzira (zvakanaka) zvakanyanya kuClicky uye ane yaburitsa nhasi! Hazviwanzo kuti iwe uwane mukana wekubatsira seizvi - asi ndinonyatsoda kuona kunyorera senge Clicky inogamuchirwa zvakanyanya. Ndoizvo zviri pachena sosi yekubatana iri nezve, handizvo ?!
Zviitire a Dzvanya Webhu Analytics account uye wozotora iyo Dzvanya WordPress Plugin.
Kucheka bvudzi uye Kuvanzika, Kupindirwa kana Chiitiko cheMushandisi?
Ndakanga ndiine matambudziko mashoma ekuvimbika ne getclicky mwedzi mishoma yadzoka asi vaiita kunge vakarongedza zvese izvi uye zvino vadzoka vachiishandisa. Muchokwadi ndakasaina yavo 'blog' package iyo yemadhora gumi nemapfumbamwe pagore inokupa yakazara yakadzama stats ye19 blogs yandinofunga kuti idhiri.
Ini zvirokwazvo ndichaedza plugin.
Jun 15, 2007 na1:56 AM
Rimwe basa rakakura Doug. Iwe wave kuita zvishoma zvepro izvozvi neWordPress plugins 🙂